एकै जिल्लामा आठ सय मेगावाट विद्युत् ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक एकै जिल्लामा आठ सय मेगावाट विद्युत् !
एकै जिल्लामा आठ सय मेगावाट विद्युत् !
२०७७, ११ आश्विन आईतवार ०९:०९
देशभर एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको मौजुदा अवस्थामा एकै जिल्लामा झण्डै आठ सय मेगावाटको बिजुली उत्पादनको थालनी सुखद सन्देश हो । यो सुवर्ण अवसर म्याग्दीले प्राप्त गर्दैछ ।
म्याग्दीमा अहिले ६२९ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसअघि १५९ मेगावाट क्षमताका लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । मौजुदा सात मेगावाटको विद्युत् उपलब्ध छ । सबै आयोजना पूरा हुँदा एक जिल्लामा ७९५ मेगावाट अर्थात् झण्डै आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार म्याग्दीबाट मात्रै झण्डै आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । निर्माणको प्रक्रिया रहेकाबाहेक विभिन्न १७ समूहले १५९ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि सर्भेको अनुमति पाएकोे विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी नीशा रिजालले
हालसम्म म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४, नारच्याङमा रहेको घलेम्दी हाइड्रोले पाँच मेगावाट र तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाले दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि नौ अर्ब १६ करोड रुपियाँ लगानी हुँदैछ ।
पश्चिम म्याग्दीको दरवाङमा म्याग्दी खोला दरवाङ आयोजनाबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि धौलागिरि कालिका हाइड्रोले पाँच अर्ब १५ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने गरी निर्माण थालेको छ ।
निर्माण थालिएका १५ जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो कालीगण्डकी गर्ज १६४ मेगावाट क्षमताको रहेको छ । मुस्ताङको दामोदर कुण्डबाट बग्ने कालीगण्डकी नदीको पानी प्रयोग गरेर बन्न लागेको कालीगण्डकी गर्जले २०७५ सालमा निर्माण अनुमति पाएको हो ।
नीलगिरि खोलामा नीलगिरि हाइड्रोले ११० मेगावाट उत्पादन गर्न द्रुत गतिमा काम भइरहेको नीलगिरि जलविद्युत्का प्रतिनिधि उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । दुवै गरी करिब १६ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी नभएको भए उत्पादन नै सुरु भइसक्ने थियो, गौतमको दाबी छ ।
निर्माणाधीन घार खोला १४ मेगावाटका लागि दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ लगानी हुँदैछ । त्यस्तै ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् निर्माणका लागि रुवर्टस् इनर्जी लिमिटेडले छ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ लगानी गर्दैछ । उक्त जलविद्युत्को निर्माण कार्य करिब ९८ प्रतिशत सकिएको कम्पनीका प्रतिनिधि चुडामणि
निरौलाले बताउनुभयो ।
म्याग्दीमा विद्युत् उत्पादनका लागि हालसम्म १५ वटा कम्पनीले निर्माण सुरु गर्ने अनुमति लिएकोमा सबैले काम भने थालेका छैनन् । राहुघाट, मिस्त्री खोला, दरवाङ म्याग्दी खोला, घार खोला, माथिल्लो राहुघाट र नीलगिरि लगायतको काम थालनी भएको छ ।
यसैगरी मध्य कालीगण्डकी, ठूलो खोला हाइड्रो, माथिल्लो म्याग्दी–पहिलो, कालीगण्डकी गर्ज, रेले खोला आयोजना भने निर्माणको तयारीमा रहेका छन् । रुप्से खोला जलविद्युत्का लागि भने विरोध भएको छ । पर्यटकीय रुप्से झरनाको पानी झरनाभन्दा माथिबाटै लैजान लागिएपछि स्थानीयवासीले उक्त आयोजनाको विरोध गरिरहेका छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार हाल म्याग्दी जिल्लाभित्रका विभिन्न १७ वटा जलविद्युत्का लागि सर्भे लाइसेन्स जारी भएको छ । म्याग्दीको चिम खोला, कुइनेमङ्गले, मुना, मुदी, नारच्याङ, दाना, गुर्जा, दरवाङमा विद्युत् उत्पादनका लागि सर्भे गर्नका लागि लाइसेन्स लिएका छन् । कुल १५ वटा विद्युत् कम्पनीले भौतिक निर्माणको लाइसेन्स (अनुमति) लिएर काम थालेका छन् । गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार
Previous articleमगर संघद्धारा म्याग्दीका बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण सुरु (भिडियो सहित)
Next articleमर्मतपछि पनि बेनी-जोमसोम सडकमा सीधा सवारी साधन सञ्चालन भएन